Marchisio Oo Maca-salaameeyey Kubadda xili-ciyaareedkan
HomeItalyMarchisio Oo Maca-salaameeyey Kubadda xili-ciyaareedkan
Juventus ayaa horyaalka ku dhamaysan doonta iyadoo uu ka maqan yahay laacibka khadka dhexe ee Claudio Marchiso oo dhaawac ka gaadhay jilibka isaga oo tababar la samaynaya xulka qaranka Italy maanta Jimcihii.
Xidhiidhka kubadda cagta Italy ee magaciisa loo soo gaabiyo FIGC ayaa xaqjiiyey maanta in laacibkan 29 jirka ahi uu ka maqnaan doono ciyaaraha muddo dhawr bilood ah islaa markaana ciyaarta is-reebreebka xulka qarankiisa ee Euro 2016 ee Bulgaria uu dhaawacaas uga maqnaan doono.
Warar hoose oo la helay ayaa tibaaxay in Juventus oo hoggaanka u haysa horyaalka Serie A uu warkani niyad jab weyn ku noqon doono iyadoo dhawaan Paul Pogba la xaqiijiyey in uu dhaawac kaga maqnaan doono illaa badhtamaha bisha May.
Dhakhtarka xulka qaranka Italya, Enrico Castellacci ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray oo lagu baahiyey barta intenetka ee xidhiidhka FIGC, waxa uu ku sheegay in iyadoo uu tababar samaynayo xulka qaranku uu dhaawac jilibka midig ka gaadhay Marchissio, kaas oo baadhitaan la sameeyey uu muujiyey in uu jiro jabniin jilibka ah, kaas oo ay kala tashanayaan dhakhaatiirta kooxda Juventus in ay go’aan ka gaadhaan in loo fasaxo kooxdiisa si ay u dawayso.
Dhaawac noocan oo kale ah ayuu Marchisio ka soo laabtay dhawaan, waxaana kooxdiisa oo horyaalka Serie A ku hoggaaminaysa 14 dhibcood ay isu diyaarinaysaa in ay guulo ka gaadho tartanka Champions League oo ay isku beegmeen Monaco.
Ramos Oo Lagu Daray Ciyaartooyada Real Madrid Ee Ciyaaraha Xagaaga
12/07/2015 Abdiwahab Ahmed
Coutinho Oo Toddobaadkan Ku Biiraya Barcelona
Messi: “Hal Koob Adduun ayaan ka jeclaa shanta Ballon d’Or”